မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 02/01/2010 - 03/01/2010
တချို့သော သူငယ်ချင်းများ စာဖတ်သူများ... မဗေဒါဘလော့ကို လာရောက်လည်ပတ်သူများရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်... My sister's wedding dinner part2ကို အနည်းငယ် ဖြတ်တန်ဖြတ်ပြီး တင်လိုက်ပါတယ်... Youtube က အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေပါရင် Audio disable လုပ်ပြစ်တတ်တာ... 10 မိနစ်ကျော်ရင် တင်လို့မရတဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေအားလုံးဝင်အောင် ကြိုးစားပြီး လုပ်ထားပါတယ်... A Moment like this သီချင်းကို နည်းနည်းလေးပဲ ထည့်ထားပြီး သီချင်း အပြည့်မဟုတ်တဲ့အတွက် အဆင်ပြေမယ်လို့ မှန်းဆပြီး သုံးခဲ့ပါတယ်... အတော်များများကိုတော့ ဖြတ်လိုက်ပါတယ်...
အဲဒိညလေးမှာ သတို့သား ညီမနဲ့ သတို့သမီး အစ်မတို့က Presenter အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ပြီး... Overall Host ကတော့ သတို့သမီးရဲ့ ညီအစ်မ ၂ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျမနဲ့ အစ်မပါပဲ... အားလုံး ပျော်ရွှင်ရအောင် စားရုံချည်းသတ်သတ်မဟုတ်ပဲ... သီချင်းသီဆိုဖို့ နဲ့ တခြား သတို့သား သတို့သမီးအတွက် surprise လေးတွေကိုလဲ သူတို့မသိအောင် ကြိတ် စီစဉ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်... လာရောက်တဲ့ ဧည့်သည်တွေလဲ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ပါဝင်ဆင်နွှဲချီး မြှင့်သွားကြတဲ့အတွက် ပွဲလေးက ပျော်စရာကောင်းခဲ့ပါတယ်... ရွှေရှမ်းကန်ရဲ့ ကာရာအိုကေစက်မကောင်းမှု သီချင်းတစ်ပုဒ်ဆိုမယ်ဆို မှောင်ထဲမှာ ခွေကို ၁နာရီလောက်ရှာရတာ... အသံညံ့တာလေးကတော့ အဲဒိညအတွက် Mood ကို အနည်းငယ် အနှောင့်အယှက်ပေးခဲ့ပါတယ်... ခုလို အခန်းအနားတွေအတွက် Stage စင်လေးရယ် သီချင်းအစီအစဉ်လေးရယ်လုပ်လို့ရအောင် လုပ်ပေးထားတဲ့ ရွှေရှမ်းကန်ရဲ့ အိုင်ဒီယာလေးကို သဘောကျပင်မဲ့ အရည်အသွေးကို Maintain လုပ်သင့်တယ်လို့ ဒီနေရာကနေ အကြံပြုချင်ပါတယ်... ခု ဗွီဒီယိုလေးနဲ့ အားလုံးရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု တစိတ်တပိုင်းကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်...
Posted by mabaydar at 11:42 PM6comments :
Labels: Video , ဗေဒါ့အကြောင်း
Posted by mabaydar at 2:44 AM No comments :
ခု မြင်ရမဲ့ ဗွီဒီယိုလေးကတော့ မဗေဒါရဲ့ အမအလတ် မင်္ဂလာ ညစာဧည့်ခံပွဲဖြစ်ပါတယ်... ဂုဏ် ပကာသန တွေ သိပ်မမက်တတ်တဲ့ ကျမအစ်မနဲ့ သူမ ခင်ပွန်းကတော့ သူများနဲ့မတူ ညစာဧည့်ခံပွဲမှာ ဂျင်းပန်ရယ် အကျီင်္ရိုးရိုးရယ်နဲ့ပဲ ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေအနည်းငယ်နဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြုလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်...
အမှန်တော့ မူရင်း ဗွီဒီယိုဟာ သီချင်းသုံးပုဒ်ရယ် ညစာအစီအစဉ် အစအဆုံးရယ်နဲ့ ပြုလုပ် ဖြစ်ခဲ့ပင်မဲ့ Youtube ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေကြောင့် လျှော့ရင်း လျှော့ရင်းနဲ့ ခုတော့ ယနေ့မှစ နှစ်တစ်ရာတိုင် သီချင်းတစ်ပုဒ်ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်... နောက်သီချင်း ၂ပုဒ်က အင်္ဂလိပ်သီချင်း "From this Moment On" နဲ့ " A Moment Like This" ကို ကျမသုံးထားပါတယ်... ဒါပေမဲ့ Youtube က Copyright rule ကြောင့် အဲဒိသီချင်းတွေနဲ့ တင်ရင် ကျမ ဗွိဒီယိုကို audio disable လုပ်ပြစ်တာကြောင့် Copyright မရှိတဲ့ မြန်မာသီချင်းက ဒီနေရာမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်....
ဒီ ဗွီဒီယိုထဲမှာတော့ သူတို့ ၂ယောက် အဲဒိနေ့ညက ပရိတ်သတ်တောင်းဆိုမှုကြောင့် အတူတူ ဆိုခဲ့တဲ့ ယနေ့မှစ နှစ်တစ်ရာတိုင် သီချင်းကို သူတို့ ၂ယောက်ရဲ့ အပြင်က Moment လေးတွေနဲ့ အတူ ရောယှက်တင်ပြထားပါတယ်... ဒီလိုမျိုး အကွက်လေးတွေရဖို့ ကျမ (ဒါရိုက်တာ)အတွက် မလွယ်ကူလှပါဘူး... ကျမစိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်အစ်မအတွဲ အတွက် ကိုယ်ကိုတိုင် လုပ်တဲ့ ဗွီဒီယိုလေးကို အမှတ်တရ အနေနဲ့ လက်ဆောင်ပေးမယ်လို့ စိတ်ကူးခဲ့တာ သူတို့ မင်္ဂလာဆောင်မယ်လို့ စပြော ကတည်းကပါ... ကျမတစ်ယောက်ထဲ ဟိုလိုအကွက်လေး ရိုက်မယ်... ဒီလိုမျိုးလေး လုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုပြီး တစ်ယောက်တည်း စိတ်ကူးတွေ ယဉ်ခဲ့တာပေါ့...
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ သူတို့ ၂ယောက်ကို အကျအန ၀တ်စား... အပြီအပြင် မိတ်ကပ်ပြင်... အစီအစဉ်ကျကျ ဇာတ်လမ်းဆင်ပြီးတော့ကို ရိုက်ပေးချင်တာ... ကိုယ့်နဲ့ အရင်းနှီးဆုံး အတွဲဆိုလို သူတို့ပဲရှိတာလေ... ကိုယ်အားမနားတမ်း ခိုင်းလို့ရမဲ့သူပေါ့... ဒါပေမဲ့လဲ မဗေဒါခမျာ နာမည်မရှိတဲ့ ဒါရိုက်တာရူးလေးဆိုတော့ စိတ်ကူးတွေက ဒီလောက်လက်တွေ့ အကောင်အထည်မဖော်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး... အားမနာတမ်း ခိုင်းဖို့နေနေသာသာ... သူတို့ စိတ်ကြည်နေတဲ့ အချိန်လေးတွေကို စောင့်စောင့်ပြီး အမြန်ရိုက်ရတဲ့ ဘ၀ပါ... ကင်မရာလေးတစ်လုံးနဲ့ အသင့်အနေအထားမှာ အမြဲပြင်ဆင်ထားရပြီး လစ်ရင်လစ်သလို တစ်ယောက်ထဲ ရိုက်ချက်လေးတွေ ကောင်းခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ပါ... သူတို့ ၂ယောက်ပုံကို မိရင် မိသလို ခရီးသွားဟန်လွဲနဲ့ အများကြီး ရိုက်ပြီး စုခဲ့ရတာပေါ့... ပြီးမှ ကောင်းနိုး ရာရာလေးတွေကို ပြန်ထုတ်ပြီး သုံးမယ်ပေါ့... သူတို့ စိတ်ကြည်နေတဲ့ အချိန်များကြုံရင်တော့ အမြန် ကိုယ်ခိုင်းချင်တာလေး နဲနဲပါးပါးခိုင်းရင်တော့ လိုက်လုပ်ပေးပါတယ်... ကိုယ်က စိတ်ကြိုက်မရလို့ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်သရုပ်ဆောင်ခိုင်းဖို့တော့ မစဉ်းစားနဲ့ ကိုယ်ပဲ အအော်ခံရမှာ... ၁ကြိမ်ပဲ ရတဲ့ အခွင့် အရေးကို အမိအရယူရင် ယူ မယူနိုင်ရင်တော့ နောက်ထပ်ရမဲ့ အခွင့်အရေးကို ကင်မရာလေးကိုင်ပြီး စောင့်ရုံပဲ... ဒါရိုက်တာမို့ သရုပ်ဆောင်ကို ဟိန်းဖို့ ဟောက်ဖို့ မစဉ်းစားနဲ့... သူတို့ ပင်ပန်းနေတဲ့ အချိန် ကင်မရာနဲ့ သွားချိန်မိရင် ကိုယ်တောင် ဟိန်းဟောက်ခံရသေးတယ်...
သတို့သားက အနေအေးအေး... ရှက်ကလဲ ရှက်တတ်တော့... ခိုင်းရ အတော်ခက်သကိုး... ကင်မရာနဲ့ ချိန်လိုက်ရင် မျက်နှာက တည်တည်သွားတယ်... ဒီတော့ သူ့ကို ရိုက်ရင် သူ သာမာန်နေနေတဲ့ အချိန်ကို ခိုးခိုးရိုက်ရတယ်... ဒါမှ ရီနေ မောနေတဲ့ ပုံလေးပါအောင်... ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်လဲ ရီခိုင်းရတာ ခက်မှခက်... ဒါတောင် ကိုယ်ပြောသမျှတော့ အတတ်နိုင်ဆုံးလိုက်လို့ပေးလို့ ကျေးဇူးကြိတ်တင်နေရတယ်... ဘယ်တော့များ " တော်ပြီဟာ... လုပ်တော့ဘူး" လို့ ထပြောမလဲ ဆိုတာကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ လန့်နေရတယ်... အဲလို ပြောခံရတဲ့ အခါတွေလဲ ရှိပါတယ်... တစ်ခါတည်း ဆက်ကြွား အဲလေ... ဆက်ပြောရရင်ဖြင့် ဒီထဲက သူတို့ ၂ယောက်ရဲ့ ပုံလေးတွေကလဲ မဗေဒါရဲ့ လက်ရာလေးတွေပါပဲရှင့်...
ဒီအတွဲ ၂ယောက်ကိုရိုက်ရင်း အားမရလို့ တခါတလေ "ငါ မင်္ဂလာဆောင်မှ ငါလုပ်ချင်တာတွေ အကုန်လုပ်မယ်... ဇာတ်လမ်းဆင်ပြီးကို ရိုက်ပစ်မယ်... " လို့ စိတ်ထဲကအပြတ်ကြုံးဝါးနေတာ.. ဟတ်ဟတ်... အဟိ... ကိုယ်နဲ့ ရတဲ့သူကလဲ အတော်အရှက်နဲပြီး ကိုယ့်လိုပဲ ပေါရဲတဲ့ သူဖြစ်အုံးမှ... အဲဒိနေ့ကလဲ ရောက်ပါမလား မသေချာလို့ တစ်ခါတစ်လေကျတော့လဲ အောင်ရဲလင်းလေးပဲ ငှားရိုက်ရင် ကောင်းမလားလို့... ဟတ် ဟတ်....
ကဲပါလေ အပြောင်အပျက်တွေ အသာထားပြီး ဗွီဒီယိုလေးကို ကြည့်ရင်း ကြင်စဦး ဇနီးမောင်နှံရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေကို မျှဝေခံစားသွားကြပါအုံးလို့...
P.S ဗွီဒီယို အဆုံးမှာ Part2To be continues လို့ ရေးထားပါတယ်... အဲဒါ အစက အင်္ဂလိပ်သီချင်းနဲ့ တင်လို့ရလောက်မယ်ထင်လို့ ရေးခဲ့တာပါ... ခုတော့ Youtube က လက်မခံဘူးဆိုတော့ To Be ကွန်တေး မညု နိုင်တော့ပါဘူးလို့....
Posted by mabaydar at 7:27 AM 12 comments :
Posted by mabaydar at 5:10 AM 60 comments :
စကာင်္ပူမှာ သင့်အိမ်ရဲ့ အနီးတ၀ိုက်နံရံမှာ O$P$ ဆိုတဲ့ သင်္ကေတလေးရယ် ဖုန်းနံပါတ်လို နံပါတ်တွေရယ် ပုံမှာပါတဲ့အတိုင်း ရေးသွားခံရပြီဆိုရင်တော့ သင့်လုံခြုံရေးအတွက် ရဲစခန်းကို အကြောင်းကြားထားသင့်ပြီလို့ အကြံပေးလိုပါတယ်... ဒါဟာ Loan Sharks တွေက သူတို့ဆီက ပိုက်ဆံချေးထားတာကို ပြန်တောင်းတာဖြစ်ပါတယ်... ကိုယ်က ချေးခဲ့တာဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မယ်... ဒါပေမဲ့ သေချာတာတော့ ကိုယ်လက်ရှိနေနေတဲ့ အိမ်နဲ့ ပတ်သတ်ခဲ့တဲ့သူ တစ်ယောက်ယောက်က ချေးခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်တယ်...
အဲလိုမျိုး အိမ်တွေကို မသိလိုက်ပဲ ငှားလိုက်မိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်... ၀ယ်လိုက်မိတဲ့သူအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်... သတိထားမိစေရန်ရည်ရွယ်လို့ ဒီပိုစ့်လေးကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ ရေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်... Loan Sharks ဆိုတာကတော့ တရားမ၀င်ငွေချေးလုပ်ငန်းတွေပါ... ကိုယ်ပိုက်ဆံလိုတဲ့အချိန်မှာ လိုသလောက်ထုတ်ပေးတတ်ပြီး... အတိုးနှုန်းအဆမတန်နဲ့ ချေးတတ်ကြပါတယ်...သာမာန်အားဖြင့် အဲလို Loan Sharks တွေဆီမှာ ပိုက်ဆံချေးတဲ့သူတွေဟာလဲ အရင်းပြန်ဆပ်နိုင်ဖို့နေနေသာသာ... အတိုးပင် ဆပ်နိုင်ခဲလှပါတယ်... ဒီအခါမှာတော့ သူတို့ ပိုက်ဆံပြန်မဆပ်လျှင် အိမ်ထိလိုက်လံကာ အန္တရာယ်ပြုတတ်ကြပါတယ်... ပထမသူတို့ Warning ၂ခါလောက်ပေးပါတယ်... သူတို့ Warning ပေးတဲ့ သင်္ကေတလေးတွေကို အောက်တွင် ဆက်ဖော်ပြပါမယ်...
Warning ပေးလို့မှ ပိုက်ဆံပြန်မဆပ်ရင် အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကို အန္တရာယ်ပြုနိုင်တဲ့အတွက် အထူးသတိထားဖို့လိုပါတယ်... စကာင်္ပူဟာ Crime rate နည်းတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တာပဲ တကယ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ မပေါ့ပါနဲ့... ကာကွယ်ခြင်းဟာ ကုသခြင်းထက် ထိရောက်တယ်ဆိုတဲ့ စကားရှိပါတယ်... Loan Sharks တွေဟာ ဒီလိုမျိုးတွေကို သူတို့ကိုယ်တိုင်မလုပ်ပါဘူး... သူတို့ကို အကြွေးတင်နေတဲ့သူတွေပိုက်ဆံပြန်မပေးနိုင်ရင် နောက်လူဆီက ရအောင်တောင်းဖို့ တဆင့်ခိုင်းတယ်လို့ သိရပါတယ်... ကိုယ့်အပူငြိမ်းဖို့အတွက် သူများကို အပူကပ်ခိုင်းတဲ့ သဘောပါပဲ...
တခါတစ်လေ ကိုယ်ချေးတာမဟုတ်ပင်မဲ့... အိမ်ရှင်က ချေးထားတာဖြစ်တတ်ပါတယ်... အိမ်ရှင်က ချေးပြီး အိမ်လိပ်စာကတော့ ကိုယ်ယခုနေတဲ့လိပ်စာဆိုတော့ အရေးအကြောင်းဆိုရင် ကိုယ့်ပဲ အန္တရာယ်လာရှာခံရမှာပါ...
ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်မငှားခင် အရင်နေသွားတဲ့သူက ချေးခဲ့ပြီး သူကျတော့ ပြောင်းပြေး... ကိုယ်က ဘုမသိဘမသိ ခံရတာတွေလဲရှိပါတယ်... အဲလိုအဖြစ်တွေကို ယခင်က ကြားရုံသာ ကြားဖူးပြီး ယုံရခက် မယုံရခက်တွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်... စကာင်္ပူလို ဥပဒေ စိုးမိုးတဲ့ နိုင်ငံမှာ ဒီလိုမျိုးတွေရှိတာ ဟုတ်ပါ့မလားပေါ့... ဒါပေမဲ့ ဟုတ်ပါတယ်... ကြားဖူးထားတဲ့ ပုံပြင်တွေက ၂ခါ ၃ခါလောက်ရှိပါပြီ...
ဘာလို့ယခုမှပြောရလဲဆိုတော့... ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတပတ် အနည်းငယ်အကြာလောက်က ကျမ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုယ်တိုင် ယခုလိုခံခဲ့ရပါတယ်... ယခု ဓာတ်ပုံတွေကလဲ သူ့ဆီကနေ original တောင်းယူပြီး ဝေငှလိုက်တာပါ... သူဟာ အဲဒိအိမ်ကို ပြောင်းလာပြီး ၁ပတ်အကြာမှာပဲ သူတို့အိမ်ရဲ့ အိမ်တံခါးကို သဘောင်္ဆေး အပြာရောင်တွေနဲ့ လာပက်သွားတာခံရတဲ့အပြင် ပုံမှာပါတဲ့အတိုင်း O$P$ ဆိုပြီးအိမ်ပြင်နံရံမှာ ရေးသွားခြင်းခံရပါတယ်...
O$P$ ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ Owe Money, Pay Money လို့ဆိုပါတယ်... ဒီလိုနဲ့ သူတို့လဲ အိမ်ရှင်ကို အကြောင်းကြား... ရဲစခန်းအကြောင်းကြား... အိမ်ရှေ့က ပက်ခံသွားရတဲ့ဆေးတွေပြန်သုတ်... ပတ်ဝန်းကျင်အိမ်တွေကလဲ လာရောက်ကြည့်ပြီးမေးမြန်းခံရလို့ အတော်လေး အလုပ်လဲရှုပ် အရှက်လဲ ကွဲခဲ့ပါတယ်... အမှန်တော့ သူတို့ချေးတာလဲမဟုတ်... အိမ်ရှင်ချေးခဲ့တာလဲမဟုတ်ပါဘူး... အရင်နေသွားတဲ့ လူကချေးသွားတာပါ... ယခုတော့ ရဲကိုအကြောင်းကြားထားလို့ ဘာမှထပ်မဖြစ်တော့ပင်မဲ့... ကျမသာဆိုရင်တော့ နေရတာ အတော် စိတ်မလုံပါဘူး... ဒါကတော့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ခဲ့တာပါ...
နောက်တစ်ခါကတော့ အတော်လေးကြာပါပြီ... ကျမ အစ်မရဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်မလေးတွေ ငှားလိုက်တဲ့ အိမ်ပါ... သူတို့လဲ အဲလိုပါပဲ... အိမ်ရှေ့တံခါးကို သဘောင်္ဆေး အနီရောင်တွေနဲ့ လာပက်သွားတာပါ... မိန်းကလေးတွေနေတဲ့ အိမ်ဆိုတော့ အတော်လေးကို ထိတ်လန့်သွားခဲ့ရပါတယ်... နောက်တော့ သူတို့လဲ ပြောင်းပြေးပြီး မနေတော့ပါဘူး... ဆေးနီဆိုတော့ ဆေးအပြာရောင်ထက် ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းမှာပေါ့နော်...
နောက်တစ်ခု ကြားဖူးတာကတော့ အတော်လေးလဲ ရယ်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်... အဲဒိ Loan Sharks တွေရဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့် သတိပေးတဲ့ အချိန်ကတော့ အိမ်ရှေ့မှာ ၀က်ခေါင်းလာချိတ်တာပါ... အဲဒိအဆင့်ပြီးရင်တော့ သူတို့ အိမ်ထဲက လူတွေကို အန္တရာယ်ပြုတော့မယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်... အဲဒိအိမ်မှာနေတဲ့ မြန်မာကောင်လေးတွေကလဲ ဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာကို ဘယ်သိမလဲ... ယောကျာင်္းလေးတွေဆိုတော့လဲ ဘာမှတော့ သိပ်ခေါင်းထဲမထားဘူးပေါ့... ပထမရက်တွေ ဆေးနဲ့လာပတ်တုန်းကတော့ ဘေးအိမ်က အဖွားကြီးက မြင်မကောင်းလို့ ဆေးဆေးပေးထားတယ်ဆိုလား...
ဒီလိုနဲ့ ၀က်ခေါင်းလာချိတ်ခံရတဲ့ နေ့ကျတော့ အဖွားကြီးလဲ လန့်သွားလို့ မလာတော့ဘူး ရဲကို အကြောင်းကြားလိုက်ပါတော့တယ်...
အဲဒိအိမ်မှာနေတဲ့ မြန်မာကောင်လေးတွေ ပြန်လာတော့ ၀က်ခေါင်းကြီး အိမ်ရှေ့မှာ ချိတ်ထားတာတွေ့တော့...
"ဟာ... နတ် မတာပဲ... ပွပြီ" လို့များထင်သွားလားမသိပါဘူး... ၀က်ခေါင်းကြီးကို သူငယ်ချင်းတသိုက် အားရပါးရဖြုတ်ပြီး ၀က်ခေါင်းသုတ်လုပ်စားမယ်ဆိုပြီး ၀မ်းသာအားရ ၀က်ခေါင်းကြီးကို အိုးထဲ ထည့်ပြုတ်ထားတဲ့အချိန်ကျတော့မှ ရဲတွေရောက်လာပြီး... ၀က်ခေါင်းကို မေးတော့ အိုးထဲရောက်နေပါပြီ... ဒီလိုနဲ့ ၀က်ခေါင်းကြီးရော သူတို့ အိုးကြီးရော စခန်းကို သိမ်းသွားပါလေရော... တော်သေးတာပေါ... အဲဒိ ၀က်ခေါင်းသုတ်က သူတို့အတွက် နောက်ဆုံး တနှပ်ဖြစ်တော့မလို့... ရဲတွေကတော့ ဒီကောင်တွေ တတ်လဲတတ်နိုင်ကြတယ်လို့ ထင်မှာပါပဲ... ကြွေးတောင်းမဲ့သူကတော့ သူ့ဝက်ခေါင်းအဖြစ်ကိုကြည့်ပြီး သွေးလန့်သွားလောက်တယ်... လုပ်ပုံက...
ကိုယ်နေမဲ့အိမ်ဟာ ဒီလိုမျိုးတွေ ကင်းမကင်းဆိုတာလဲ သေချာတတ်အပ်ကြိုသိနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတော့ သိပ်မရှိပါဘူး... ဖြစ်နိုင်ချေအနည်းအကျဉ်းလောက်ပဲ မေးမြန်းလို့ရမှာပါ... အိမ်ငှားတည်းက အိမ်ရှင်ရဲ့ ငွေရေးကြေးရေး အခြေအနေဘယ်လောက်ရှိလောက်လဲဆိုတာ လေ့လာအကဲခပ်ပါ... နွမ်းနွမ်းပါးပါးလား... ရှိရဲ့နဲ့ အိမ်ပိုနေလို့ငှားတာလား... တချို့ရဲ့ အကြံပြုချက်အရကတော့ အိမ်ရဲ့ မီတာဗုံးကိုလဲ ကြည့်သင့်ပါတယ်တဲ့... အိမ်မှာ မီတာဗုံးရှိရဲ့လား... အလုပ်ရော လုပ်သလားဆိုတာကိုစစ်ပါတဲ့... တချို့ငွေမပြေလည်သူတွေအိမ်မှာ မီတာဗုံး အပိတ်ခံထားရတာတို့ ရပ်နေတာတို့တွေရှိတတ်ပါတယ်တဲ့... ဘာကြောင့် ဒီအိမ်ကို ငှားတာလဲ/ရောင်းတာလဲ ဆိုတာကိုလဲ အနည်းငယ် တီးခေါက်ကြည့်သင့်ပါတယ်တဲ့...
အိမ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်လဲ အိမ်ရှင်ကို ဘာကြောင့်ရောင်းတာလဲဆိုတာကို မေးမြန်းသင့်ပါတယ်... ကြားဖူးသလောက်တော့ အိမ်ထောင်ကွဲလို့ရောင်းတာ ဆိုရင်တော့ သူတို့ Personal Reason ကြောင့်ဖြစ်ပြီး အိမ်မှာ အထူးတလည်ပြဿနာမရှိနိုင်တဲ့ အတွက် စိတ်အေးနိုင်ပါတယ်... (မြန်မာအယူအရတော့ အိမ်ကခိုက်လို့ပဲ အိမ်မှာနေတဲ့ လင်မယားကွဲသလား... ဘာညာ တွေးကြတဲ့သူတွေလဲ ရှိမှာပါ... ဒါကတော့ ကိုယ်ယုံကြည်ရာပါ... ကျမက သူများတွေ အကြံပေးတာ ကြားဖူးတာကို မျှဝေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်)... လင်မယားအိမ်ထောင်ကွဲလို့ ရောင်းတဲ့ အချက်ရဲ့ ကောင်းတဲ့ အချက်နောက်တစ်ခုကတော့ သူတို့ဟာ ကိစ္စအမြန်ပြီးချင်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ကို အိမ်လွှဲမဲ့နေ့တွေဘာတွေကို အမြန်ဆုံးရနိုင်ပါတယ်... သူတို့ဘက်ကလဲ နှောင့်နှေးခြင်းသိပ်မရှိတတ်ပါဘူးတဲ့...
ဒီတော့ Loan Sharks ကိစ္စ ပြန်ဆက်ရရင်ဖြင့် ဒီလို အဖြစ်တွေကို အိမ်ငှားမဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမများအနေနဲ့ ကြိုမသိနိုင်တဲ့အတွက် တကယ်လို့ ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသော်... သတိလက်လွတ်မနေပဲ... လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အိမ်ရှင်ကို အကြောင်းကြားခြင်း... ရဲစခန်းကို အကြောင်းကြားခြင်းများကို ချက်ချင်းပြုလုပ်သင့်ကြောင်း အသိပေးရေးသားလိုက်ပါတယ်...
Posted by mabaydar at 2:47 AM 8 comments :
Posted by mabaydar at 6:36 AM2comments :
အရင်ဦးဆုံး ဦးစွာ မေတ္တာရပ်ခံလိုတာကတော့ ဘလော့ကို အကြာကြီး ပစ်ထားမိခဲ့တာကိုပါ... ဘလော့ပိတ်သွားသလားလို့ တချို့စာဖတ်သူတွေ သံသယဖြစ်စရာရှိပါတယ်... အမှန်တော့ မဟုတ်ပါဘူး... မဗေဒါဘလော့ကို ဘယ်တော့မှ မပိတ်ပါဘူး...အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မရေးဖြစ်တာပဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်... ဘလော့မရေးတော့ပါ နှုတ်ထွက်ပါတယ်လို့ ဘယ်တော့မှ မပြောပါဘူး... အမှန်တော့ ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ... မဗေဒါ ဒီဇင်ဘာ ဒုတိယပတ်လောက်ကနေစပြီး မြန်မာပြည်ကို ပြန်ခဲ့ပါတယ်... မြန်မာပြည်မှာ ၁လနီးပါးနေခဲ့တဲ့ ကာလအတွင်း ကံဆိုးစွာပဲ မဗေဒါရဲ့ www.mabaydar.co.cc ဆိုတဲ့ အကောင့်က expired ဖြစ်သွားပါတယ်... အမှန်တော့ blogspot ထဲဝင်ပြီး setting လေးကို ပြန်ပြောင်းလိုက်ရုံပဲဆိုပေမဲ့... အားလုံးသိတဲ့ အတိုင်း ကျမဟာ မြန်မာပြည်မှာ အင်တာနက်သုံးဖို့ beginner အဆင့်ပဲရှိတဲ့အတွက် ဘန်းကျော်ဆိုသည်များကို မလုပ်တတ်မကိုင်တတ်... စာမျက်နှာတစ်ခုဖွင့်ပြီးတိုင်း ထိုင်ထိုင်စောင့်နေရတဲ့ အချိန်တွေကို စိတ်မရှည်တတ်လေတော့ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး... ဂျီတော့မှာတော့ ဘန်းကျော်ကို ဘယ်လိုဝင်ရမလဲဆိုပြီး status တင်ထားတော့ အားရ၀မ်းသာတော့ လာသင်ပေးကြလေရဲ့...
Proxy ကို ဘာနံပါတ်ကို ပြောင်းလိုက်... ဟိုလုပ်.. ဒီလုပ်နဲ့... ဒါမှမဟုတ် http မှာ s ထည့် စသည်ဖြင့်ပေါ့... ကြိုးစားကြည့်တော့လဲ... ကျမတစ်ခါမှ မမြင်ဖူးတဲ့... www.blogger.com က ကုလားစာတွေလိုလိုနဲ့ ပေါ်လာပြန်ပါတယ်... ကုလားလိုတွေဆိုမှတော့ ဘယ်လိုလုပ် ကျမဖတ်တတ်မတုန်း... ဒီလိုနဲ့ပဲ စကာင်္ပူပြန်ရောက်မှပဲ လုပ်တော့မယ်ဆိုပြီး စိတ်လျော့ထားလိုက်တာ... ၂၀၁၀ ဇန်န၀ါရီလ ၁ရက်နေ့ နှစ်သစ်မှာတော့ စိတ်ကောင်းရှိစွာ blogspot ကို စကာင်္ပူကအတိုင်းပဲ ဘာ ဘန်းကျော်မှ မလိုပဲ ၀င်လို့ရနေတာ ထူးဆန်းစွာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်... ဒီလိုနဲ့ပဲ www.mabaydar.blogspot.com လို့ ပြန်လည်ပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်...
အမှန်တော့ ခါတိုင်း မဗေဒါ ခရီးသွားခံနီးဆိုရင် မသွားခင်ညမှာ စာဖတ်သူတွေကို အသိပေးသွားဖြစ်ပင်မဲ့... သိတဲ့အတိုင်း မြန်မာပြည်ပြန်ရင် ကိစ္စတွေက တခြားနိုင်ငံသွားတာထက်ပိုများပါတယ်... အော်... လက်ဆောင်ပစ္စည်းဝယ်ရ... ဘာရကိုပြောပါတယ်... တခြားမပြောပါဘူး... ပိုက်ဆံဆိုတာလဲ တခြားနိုင်ငံသွားရတာထက်တောင် ကုန်ပါသေးတယ်... ဘဏ်အကောင့်လေးဆို သုံညလေးကိုပြလို့... ဟတ်ဟတ်... အလုပ် ခွင့်ရက်ဆိုတာလဲ မနည်းကို fight ပြီးယူရတယ်... မနှစ်က ဒီဇင်ဘာမှာ မြန်မာပြန်တဲ့သူကလဲ အများသားလို့ ထင်မိပါတယ်... မြန်မာပြည်ရောက်လို့ လေဆိပ်က Immigration တို့ custom တို့ဖြတ်ရင်လဲ အရမ်းရင်ခုန်ရတယ်လေ... (ကိုယ့်ပြည်ကြီးထဲ ကိုယ်ပြန်ရောက်ဖို့ နောက်ဆုံးတံခါးချပ်နားရောက်လို့ အပျော်လွန်ပြီး ရင်ခုန်တာကို ပြောပါတယ်... တမျိုးမထင်ကြပါနဲ့... )... ကဲ ဒါတွေထားလိုက်ပါတော့... နောက် မြန်မာပြည် ပြန်တဲ့ ခရီးသွားမှတ်တမ်းမှပဲ စုံအောင်ရေးတော့မယ်...
ဒီတော့ မဗေဒါဘလော့ကို လာဖတ်နေကျ စာဖတ်သူများအတွက် မရေးတဲ့ သက်တမ်းကကြာတဲ့အထဲ co.cc ဆိုတာကို ၀င်လိုက်ရင် www.mabaydar.co.cc has expired လို့ပေါ်နေတော့ မဗေဒါများ ဘလော့ဖျက်သွားပြီလားလို့ ထင်ကောင်းထင်နေပါလိမ့်မယ်... လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး... တကယ်လို့ မဗေဒါဘလော့ကို ဘလော့ roll တွေမှာ တင်ပေးထားသော ညီအစ်ကိုမောင်နှမများကိုလဲ လင်ခ့်လေးပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်... အားလုံးပဲ မဗေဒါဘလော့လေးကို အရင်လိုလာရောက်ဖတ်ရှု အားပေးကြဖို့ကို မျှော်လင့်ပါတယ်... ယခုထိအားပေးနေသော စာဖတ်သူများကိုလဲ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်...
Posted by mabaydar at 11:03 PM 1 comment :